Sida loo tirtiro xisaabtaada Yahoo
Email & Fariin Talooyinka Yahoo & Tricks
Kudhaw xisaabtaada Yahoo Mail adoo raacaya tallaabooyinkaas fudud.
In yar oo talaabo ah, waxaad xiri kartaa koontadaada oo dhan Yahoo si aad u joojiso helitaanka cinwaanka emailkaaga, ka saar dhammaan dhammaan emailadaada, kana hortagaan dadka inay kuu soo diraan.
Maxay Taas micnaheedu tahay in la tirtiro Yahoo Mail Account?
Tirtiridda xisaabta Yahoo Mail micnaheedu maahan kaliya in e-mailkaaga laga tirtiri doono oo aad waayi doonto helitaanka koontadaada, laakin waxaad sidoo kale heli doontaa in aad marinayso goobaha My Yahoo, xisaabtaada iyo sawirada Flickr iyo xogo kale oo lagu keydiyo Adeegyada Yahoo.
Haddii aad bixinayso adeega adeega Yahoo, xasuuso inaad baajiso liiskan marka hore si aad uga fogaatid lacagaha aan la filayn. Sidoo kale waa run haddii aad leedahay xubin ka tirsan Flickr Pro.
Ogsoonow: Xirashada koontadaada Yahoo ma joojin doonto khidmadaha tooska ah ee la xidhiidha koontadaada.
Marka aad xirto koontadaada Yahoo, qof kasta oo isku dayaya in uu farriin u diro cinwaanka emailka wuxuu isla markiiba helayaa fariin kale oo fariin ah.
Si aad uga fogaato jaahwareerka iyo walwalka, hubi inaad u sheegto asxaabtaada iyo xiriirada aad ku xirayso koontadaada Yahoo Mail - labadaba cinwaanka emailkaaga ee aad qorsheyneyso inaad isticmaasho mustaqbalka (si ay si fudud uga jawaabi karaan si ay kuu gaaraan) iyo Cinwaanka Yahoo Mail (si aad u hubiso in farriinta la helay).
Fiiro gaar ah: Ka eeg qaybta hoose ee boggan wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan waxa dhici doona kadib markaad tirtirto cinwaanka emailkaaga iyo koontadaada.
Furan Yahoo ee "delete user" iyo galaan markii la weydiiyo.
Fiiro : Haddii aadan arkeynin ikhtiyaari aad ku joojin karto koontadaada, oo aad u maleyneyso inaad leedahay BT Yahoo Mail halkii, hoos fiiri.
Talo: Waxaad dib u heli kartaa boggaaga Yahoo ee la illoobay haddii aanad hubin waxa ay tahay.
Akhri qoraalka bogga cinwaankeedu yahay "Ka hor intaan sii socon, fadlan ka fiirso macluumaadka soo socda." Waxay faahfaahinaysaa waxa aad lumin doonto marka aad tirtirto koontadaada Yahoo. Guji ama guji badhanka Continue .
Ku celi cinwaanka emailkaaga mar labaad sanduuqa qoraalka ah.
Xulo Haa, jooji koontadan .
Waxaad ogaan doontaa in ay shaqeysay haddii aad aragto fariin akhrinaysa "Koontadaada waa la tirtiray waana la qorsheeyay si loo tirtiro."
Guji ama ku dhufo Nucleer wanaagsan si aad ugu noqoto bogga Yahoo.
Xaaladaha qaarkood, Yahoo ma saari doonto wax walba ilaa 180 maalmood, laakiin taasi waxay ku xiran tahay dalka aad ka soo saxiixatay. Xogta ku xiran xisaabaadka "Premium Finance Premium Yahoo" waxaa laga yaabaa in lagu hayo seddex sano oo kalandaar ah.
Sidee loo Bixiyaa BT Yahoo Mail Premium Account
Haddii aad heshay koontadaada Boostada BT, ma joojin kartid adeegga adoo isticmaalaya bogga Yahoo Mail. Si kastaba ha ahaatee, waad la xiriiri kartaa BT si toos ah si aad uhesho xisaabtaada Yahoo Mail Premium.
Waxyaabaha Laga Xuso
Waa kuwan waxyaabo muhiim ah oo laga yaabo in ay ka warqabaan marka ay timaado tirtiridda xisaabtaada Yahoo:
Maxaa ku dhacaya My Yahoo Mail Magaca iyo Cinwaanka Email? Cinwaankaaga iyo cinwaanka emailkaaga ayaa loo heli doonaa dadka kale si ay u isticmaalaan mustaqbalka, si ay u helaan farriin loola jeedo adiga haddii kuwa soo diraa wali isticmaalaan cinwaankaagii hore email ahaan.
Dib ayaan u diidi karaa xisaabta Yahoo Mail qarisay? Haa, waad dib u dhaqaajin kartaa xisaabtaada xitaa ka dib markaad calaamad u tirtirto. Si aad dib ugu furto xisaabta Yahoo Mail laga tirtiray, kaliya ku qor koontada 40 maalmood gudahood ka dib markii la tirtiro. Waxaad ku sameyn kartaa tan iyadoo loo marayo bogga shabakada ee Yahoo Mail joogto ah. Markaad dib u soo celiso koontada, waxaad bilaabi kartaa inaad emails mar kale mariso, laakiin ogow inaadan awoodin inaad aragto emails kasta oo loo diray koontada markii la xidhay.
Maxaa Ku Fadlan Xayeysiisyada Loo Diray Cinwaankayga Kadib Markii aan xiro My Mail Mail? Dhanka kale (bilawga sida ugu dhakhsaha badan ee aad uhesho koontadaada), dadka soo diraya waxay isku dayayaan inay kuugu soo diraan cinwaankaaga cinwaanka cinwaanka erayga la tirtiray waxay heli doontaa fariin kale oo fariin ah.
Fariinta waxaa laga yaabaa in ay sidan oo kale u sheegto:
SMTP 554 qaladka dhiibista: dd Fadlan fariin u dir *** ***@yahoo.com lama soo saari karo. Koontadani waa mid curyaan ah ama joojisay [# 102]. - MTA *** mail. ***. yahoo.com
Si kastaba ha noqotee, fariintan hadda lama arki doono haddii aad dib u dhaqaajiso koontadaada sida kor lagu sharaxay.
Yahoo! Farriinta Farriinta iyo Xaddidaadda Xaddiga Xaddiga
Baro sida loo abuuro Yahoo Mail Account
Baro si sax ah u soo dir lifaaq leh Yahoo Mail
Sida loo Isticmaalo Khariidadaha Maab ee Yandex.Mail
Sida loo Furo Furaha Keydka Yahoo! Boostada
Dib-u-eegista Email-ka cusub ee Yahoo! Boostada
Sidee loo qoraa Yahoo! Waraaqaha Boostada
Sida Loo Beddelo Your Yahoo Password Password
10 Wareegyo Wareer ah oo kaliya laga heli karaa Tumblr
7da ugu qiimo jaban ee TV-yada ah ee lagu iibsado sannadka 2018
Dib u Dajinta: LG G Flex 2 Back Cover Tutorial
Laydhka LCD iyo Gamegyada Midabka
Waa maxay Channel Channel?
Hagaha Muuqaalka Tusmooyinka
Tilmaamaha loo sameynayo Facebook Sawirro gaar ah
8 Qosol Xassan Weli Waxtarrada Awoodda "Chi-Fi Tube"
Sidee loo Xalliyaa Ntdll.dll Cilladaha
Top 10 Xbox Live Arcade Ciyaaraha
Sida loo Qabto Madaxda Farriimaha waawayn ee Muuqaalka
Sidee Kaararka Ballaadhinta Reseat
Daboolida Farshaxanada Bilaashka ah ee loogu talagalay Muusikada Digital
Sida looga fogaado kharashyada xogta rarista
7 Widget Widget Widgets
Waa Maxay Faylka ACO?
Kusoo bandhig boggaaga internetka ee AIM
10ka Mesh ee Shabakadaha Wanaagsan ee Wareegyada Wi-Fi si ay u iibsadaan 2018
8-ka kartoon ee ugu wanaagsan ee laga iibsado sannadka 2018